အငွေ့ Extraction စနစ်များ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေအငွေ့ Extractor -> အငွေ့ Extraction စနစ်များ
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. 1990 ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝသောလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ, ငါတို့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် အငွေ့ Extraction စနစ်များ နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွက်တဆယ်နှင့်ဤလယ်ပြင်၌အတွေ့အကြုံကောင်းအပေါ်မှီခိုအားထားလွန်းကျနော်တို့ကိုကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုရယူနှင့်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ပြီ Taiwan.
ကျနော်တို့၏ဖောက်သည်ဆုံးပြီးပြည့်စုံသောစက်ရုံသည် "တည်ငြိမ်တဲ့အရည်အသွေး, အပြုသဘောထုတ်ကုန် R & D, ရိုးသား & မြန်ဆန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု" ၏ရည်မှန်းချက်ကိုရည်စူး
။ အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းကနေမွေးဆရာမွေးမျှော်လင့်, သင့်ကျေနပ်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထာဝရအသသည်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဂဟေဆက်အငွေ့ Extractor စနစ်
ကတော့နှစ်ခုထုတ်ယူလက်နက်နည်းပညာပါရှိပါတယ်ဒီစနစ်ကိုဖွင့်ဖို့နှစ်ဦးတွေ workstations တွေသည်အငွေ့ထုတ်ယူပေးပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်ယူလက်နက်7ပေရှိကြ၏။ ရှည်လျားတစ်ခုချင်းစီ။ ဤစနစ်ကိုပိုမိုသေးငယ်, စားပွဲထိပ်တွင်ယူနစ် sufficent မည်မဟုတ်ဘယ်မှာအလုပ်ရှုပ်, စီးပွားဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့မဟုတ်မှလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်နှင့်တာရှည်ခံစဉ်အခါ, ယူနစ်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူကိုပူဇော်ပါဘူး။ အဓိကအခြေစိုက်စခန်း lockable casters တပ်ဆင်ထားပြီးနဲ့အလွယ်တကူလူတစ်ဦးအားဖွငျ့ maneuvered နိုင်ပါသည်။ ယူနစ်အတွက် filter ထားနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံလာပါတယ်။
● Dual ကိုထုတ်ယူ။ နှစ်ခု7ပေ။ ထုတ်ယူခြင်းလက်နက် (ရေပိုက်), 6-1 /2"ကတော့နေလနှင့်အတူ။
●ပြည်တွင်း pump: brushless, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ centrifugal fan မော်တာ။
● Air လေကြောင်းလိုင်းစီးဆင်းမှု: 175m3 / hr ။ 75mm လက်ရုံးတော်နှုန်း။
● Quiet စစ်ဆင်ရေး။ ဆူညံသံအဆင့်: 50dB ထက်နည်း။
● Long-ရေရှည်တည်တံ့ filter ကို။ 8 နာရီနေ့အဘို့သုံးတဲ့အခါ filter ကို4မှ6ပတ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
●အရွယ်အစား: 12 "x 12" x ကို 16-1 /2"(HT casters နှင့်အတူ။ ) ။
●အလေးချိန် 36 ပေါင်။
အငွေ့ Extraction စနစ်
Desktop ပေါ်မှာအငွေ့ Extractor